Na -amụ Bekee ma ọ bụ French na Canada - ụlọ akwụkwọ asụsụ BLI na Canada
Schoolslọ akwụkwọ anyị
Mmemme Ogu abua
Bekee na French
Okenye & Ndi okenye
Nkwadebe Udiri TwaleQ
Afọ iri na ụma & ụmụaka
Mmemme Elementary & High School
Mmemme athzọ .zọ
Ulo akwukwo CDI
Ụlọ akwụkwọ Herzing
Gaa na GIM
Akwụkwọ Institut Grasset
Ụlọ akwụkwọ nkiri Toronto
Ugwu Prince Edward
Mahadum nke Prince Edward Island (UPEI)
Mahadum Saint Michael's College
Hatlọ Ọrụ Manhattan nke Nchịkwa (MIM)
TEF Canada na TEFAQ
Mgbe emechara ulo akwukwo
FLAP | Ogige okpomọkụ
Ụlọ akwụkwọ asụsụ dị n'ịntanetị
B na-asụ Asụsụ abụọ?Na-amụ Bekee ma ọ bụ French
Mụọ Bekee ma ọ bụ French na Canada wee bụrụ akụkụ nke ezinụlọ BLI.
Anyị enyerela ọtụtụ puku ụmụ akwụkwọ aka ịmụta Bekee na French na Canada.
GỤKWU NDỊ TAA
Mụta Bekee ma ọ bụ French na CanadaTinye akwụkwọ ugbu a - Mụọ akwụkwọ ma emechaa
Ọ bụrụ n ’ị na-arọ nrọ mgbe nile banyere ịmụ mba ọzọ, nke a bụ oge kwesịrị ime ya.
BLI Canada na-enye ego dị egwu ị nwere ike iji
ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụ Bekee ma ọ bụ French na Canada!
Debe usoro gị ugbu a wee bido na ụbọchị ọdịnihu, mgbe ihe niile dị na nkịtị.
Chọrọ ịmụ ihe site na ntụsara ahụ nke ụlọ gị?Nkuzi Bekee na French Online
Ihe omume niile dị
Mụọ Bekee ma ọ bụ French na Canada ọbụlagodi na ịnweghị ike ịnọ ebe a.
Were ndị nkuzi anyị dị na Kanada were asụsụ Bekee ma ọ bụ French
na klaasị ọtụtụ ntanetị n'ịntanetị ma melite asụsụ gị.
Can nwere ike ịhọrọ n’ime nhọrọ abụọ anyị:
Bido ịmụ asụsụ Bekee ma ọ bụ French na ntanetị wee mezue mmemme gị na Canada
ma ọ bụ gaa maka nhọrọ ịntanetị.
Chọpụta ọkwa Bekee gịFree
Nyocha nke Bekee
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụ Bekee na Canada mana ị maghị oge ọ ga-ewe gị
iji mụta ma ọ bụ mụta asụsụ ahụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọkarị ịma ọkwa Bekee gị,
Can nwere ike ịnwale ule Bekee anyị n'efu ma chọpụta taa.
Were ule larịị
You chọrọ ịma ihe ọkwa French gị bụ?Free
Chọpụta ihe ọkwa French gị bụ site na ịnwale ule larịị nke Free.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụ French na Canada mana ị maghị oge ọ ga-ewe gị
mụta ma ọ bụ mụta asụsụ ahụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọkarị ọkwa French,
Can nwere ike were nnwale ọkwa French anyị n'efu wee chọpụta taa.
Mmụta Bekee na French OnlineMụta Bekee ma ọ bụ French ONLINE
Deba aha taa na
nweta 50% pụọ
Mụọ Bekee ma ọ bụ French site na nkasi obi nke ụlọ gị. Ọ bụrụ na ọnọdụ ụwa ugbu a emetụtala gị, ị nwere ike ịmalite mmemme gị n'ụlọ wee mechaa ya na Canada ozugbo ihe niile laghachiri na nkịtị.
Ọ bụrụ n’inweghị atụmatụ ọbụla ị ga-abịa Canada n’ọdịniihu, ị ga-erite uru na ya.
Ịmụta ỊntanetN'ỤLỌ NCHE AHỤ
Schoolslọ akwụkwọ Asụsụ na CanadaNa-amụ Bekee ma ọ bụ French na Canada
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ akwụkwọ kacha mma iji mụta Bekee ma ọ bụ French na Canada, ị nọ ebe kwesịrị ekwesị.
BLI Canada nwere mmemme ị na-achọ. Anyị na-enye nkuzi Bekee na French na Montreal na Quebec City maka mmadụ niile. N'agbanyeghị ihe mgbaru ọsọ gị, na BLI anyị ga-enyere gị aka iru ya.
BLI kwadoro na ị ga-enweta nsonaazụ ndị ị na-achọ. Anyị ga-enyere gị aka imezu ebumnuche gị n'agbanyeghị ebumnuche gị. Ma ebumnuche gị bụ ịmụ Bekee ma ọ bụ French maka izugbe, agụmakwụkwọ, azụmahịa, ma ọ bụ ebumnuche ule, anyị ga-enyere gị aka iru ebe ahụ.
Anyị nwere ọtụtụ nkuzi dị iche iche maka ọkwa niile na usoro dị iche iche. Ma ị bụ onye mbido ma ọ bụ nwata akwụkwọ dị elu nke chọrọ imezu asụsụ gị n'otu mpaghara, ndị nkuzi anyị ga-akwado gị site na nzụlite mmụta a.
Anyị nwere usoro ihe omume dịịrị gịNhọrọ Mmemme
BỤ N'ỤLỌ NCHE
Agụmakwụkwọ Bekee na Montreal ma ọ bụ Ntaneti. Mụta Bekee ma zụlite asụsụ asụsụ anọ bụ isi: ikwu okwu, ịgụ ihe, ige ntị na ide ya na njiri mara asụsụ, asụsụ na ụda olu.
KỌỌ MENR FRR.
Ọmụmụ French na Montreal, Quebec City ma ọ bụ Online. Kwadebe onwe gị iji kwurịta okwu na-enweghị isi na nke okike ma mụta otu esi ekwupụta echiche gị na echiche gị nke ọma na ọnọdụ ziri ezi n'ọnọdụ dị iche iche.
AKW ONKWỌ AK ONKỌ N'ONLỌ NRI
Mụọ Bekee ma ọ bụ French na ntanetị. A na-akụzi klas BLI na ntanetị site n'aka ndị nkuzi anyị oge niile, na-elekwasị anya na nka mmekọrịta. A na-akwado klas na usoro ikpo okwu anyị.
Usoro nkwadebe anyị nke IELTS ga-enye gị nnabata mmalite nke usoro nyocha IELTS
Emebere BLI TEFaQ akwadebe n’inyere gị aka ịzụlite nkà ịchọrọ iji nwee ihe ịga nke ọma na ọnụ okwu ma na-ege ntị nke model TEFaQ.
Ihe omume Bekee BLI ga-akuziri gi ihe omuma banyere oru. Na mmechi nke mmemme ahụ
Ihe omume BLI Business French ga-akuziri gi ihe omuma banyere oru. Na mmechi nke mmemme ahụ
AKW EDKWỌ NS.
Ọ bụrụ n’inweghị oge ị na-eme iji tozuo oge niile, ị nwere ike ịdebanye aha na otu nkuzi Bekee na nke French a na-enye n'oge mgbede ma bido imeziwanye asụsụ gị taa.
Mmemme oge oyi nke BLI FLAP na-enye ahụmịhe dị egwu na mba ọzọ jikọtara mmụta Bekee na French yana ọtụtụ ihe omume dị ụtọ na gburugburu ebe nchekwa na nke ọma.
Ọmụmụ asụsụ abụọ
Mmemme asụsụ abụọ nke BLI na-enye gị ohere ịmụ, ịtụle na itinye akụkụ niile nke mmụta asụsụ, na-ekpuchi ha anọ
Mmemme niile anyị gụnyere na-enye gị ahụmịhe pụrụ iche, na-enye gị ohere imeziwanye asụsụ gị n'asụsụ Bekee ma ọ bụ French.
Ezubere usoro izu ụka anyị iji dabara adaba na ndụ gị na mkpa ọrụ.
Mmemme BLI na-enye ahụmịhe dị egwu na mba ọzọ ijikọ asụsụ Bekee na French na ọtụtụ ihe ụtọ dị iche iche na gburugburu ebe nchekwa na nlekọta.
EGO gị nke CANADAMmemme athzọ .zọ
Would ga-achọ ịmụ akwụkwọ na Canada n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na nke a mere ị ga-esi bụrụ onye Canada bi?
BLI na-eme usoro a dị mfe. BLI Canada nwere nkwekọrịta na ọnụ ọgụgụ buru ibu ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-enye agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Y’oburu n’iru usoro ihe omume BLI, you gha enweta ọzụzụ ichoro iru asusu kwesiri ekwesi iji bido mmemme dika nke ahu, ma nke kachasi, ị ga akwado onwe gi ime nke oma ozugbo ibido akwukwo.
Programnweta usoro ihe omume BLI ga - enyere gị aka imeziwanye agụmakwụkwọ na ọgụgụ ederede gị. Ọzọkwa, ị ga-amụta usoro nyocha na usoro mkparịta ụka ga-aba uru ozugbo ị malitere ọmụmụ gị n'otu ụlọ akwụkwọ ibe anyị.
Schoolslọ akwụkwọ anyịAbalị abụọ dị egwu
Mụta Bekee ma ọ bụ French na Canada. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụ asụsụ French ị nwere ike ịhọrọ ụlọ akwụkwọ anyị dị na Montreal na ụlọ akwụkwọ French anyị na Quebec City. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụ Bekee, BLI Montreal na-eche gị
Questions nwere ajụjụ
[Kọntaktị-ụdị-7 404 "Ọ bụghị Hụrụ"]
Njirimara 400, 70 Rue Notre Dame Ouest
Mọnde - Fraịdee: 8:30 AM - 5 PM
Nnwale Ebe Bekee
Nwale Ebe Nlele nke French
Mkpụrụ Akwụkwọ Ụlọ Akwụkwọ
Nkwụ ụgwọ ịntanetị
Bụrụ onye nnọchi anya
Ndebanye aha mmemme
BL 2020 BLi Canada. Ikike niile echekwabara.